प्रधानन्यायाधीशज्यू, अबको न्यायालय कस्तो बनाउने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
प्रधानन्यायाधीशज्यू, अबको न्यायालय कस्तो बनाउने ?
२०७७ असार १५, सोमबार ०६:१४:००
वर्णन टिप्पणी । संसारका ठूला व्यापारिक घराना एवं प्रतिष्ठान, सरकारी संरचना र कतिपय राज्य संयन्त्रले समेत आफूभित्र छरितोपन कसरी ल्याउने भनेर समीक्षा गरिरहेका छन् यतिखेर । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रकोपले यसरी सोच्न हरेक संस्थाका व्यवस्थापकलाई फुर्सद र बाध्यता दुवै दिलाएको छ ।
नेपालको न्यायालय भने यतिखेर हाइ काढेर बसिरहेको प्रतीत हुन्छ । न्यायालयको मात्रै के कुरा ? सिंगो राज्यसंयन्त्र लकडाउन वा सेवाग्राहीको कम आवागमनलाई विदाजस्तो गरी ढुक्कले हात बाँधेर बसकेको छ । सिर्जनशील व्यक्तिले हात बाँधे पनि सोच्न छाड्दैन । तर यहाँ त सोच्ने दिमागमा पनि ताला लगाइएको जस्तो अनुभूत हुँदै छ ।
हाम्रो न्यायालय अहिले अनावश्यक बेलुन फुकेजस्तो विस्तार हुँदै छ । छरितो हुनुपर्ने कर्मचारी प्रशासन, इजलास संरचना अनावश्यक भद्दा हुँदै छ । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि गैरन्यायिक कर्मचारीहरुको भर्तीमा कतै पनि मीतव्ययिता र उत्पादकत्व हेरिएको छैन ।
अर्धन्यायिक संरचना, न्यायाधीकरण र विशिष्टीकृत अदालत जति थपिँदै र बढ्दै छन्, त्यस आधारमा भन्ने हो भने नियमित अदालत झन् छरितो हुनुपर्ने हो । अरुभन्दा कम बोझिलो हुनुपर्ने हो । तर भइरहेको छ ठीक उल्टो ।
संरचनामाथि संरचना थपिँदै छ । दरबन्दीमाथि दरबन्दी बढाइँदै छ । पद, व्यक्ति, कुर्सी, टेबुल, भवन र गाडीको थुप्रो लाग्दैमा प्रणालीको विकास नहुने रहेछ भन्ने अहिलेको न्यायालयले देखाइरहेको छ । यो भद्दा प्रणाली र संरचनाको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । वास्तवमा यो अधिकतम सीमा हो । पहिला अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हुन्थ्यो । अस्थायी न्यायाधीशका नाममा अनेकन राजनीति भएपछि त्यो विकृति हटाउन स्थायी दरबन्दी मात्र राखियो ।
अनि कुनै पनि संवैधानिक पदमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै पदपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कुरा संविधानमै लेखियो । संविधानको यो व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक छ । यस व्यवस्थाले त के देखाउँछ भने अदालतको कार्यबोझ सधैँ उही र उस्तै रहिरहन्छ ।
यथार्थ त्यो होइन । सर्वोच्च अदालतमा यति ठूलो संख्याका न्यायाधीश पनि आवश्यक छैन । २० हजार मुद्दा बोकेर यो अदालत बस्न र टिक्नपनि सक्दैन । यसभन्दा कम न्यायाधीश हुँदा पनि विगतमा ९ हजारमा झरिसकेका मुद्दा पछिल्लो समय पूरा दरबन्दीका न्यायाधीश हुँदा पनि कसरी २० हजार कटे ? प्रधानन्यायाधीश र न्याय कानुनका नीति निर्माताहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने प्रश्न छ यो ।
संविधानले संवैधानिक इजलासको बेग्लै संरचना परिकल्पना गरेको छ । २०७२ यताका प्रधानन्यायाधीशका लागि यो नै भालुको कन्पट सावित भइसकेको छ ।
वास्तवमा सर्वोच्च अदालत आफैमा संवैधानिक इजलास हो । अझ भनौँ यो संवैधानिक अदालत हो । तर संवैधानिक अदालतका रुपमा विकास गर्न हरेक पटकको नेतृत्व चुकेको छ ।
जटिल संवैधानिक कानुनी प्रश्न समावेश भएका विषयवस्तु मात्र यस अदालतले हेर्ने, बाँकीमा उच्च अदालतलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने सर्वोच्चको गरिमा रहन सक्छ ।
सर्वोच्चलाई अभिलेख अदालत पनि भनिएको छ । यसले नजिर कायम गर्छ । नयाँ विधिशास्त्र प्रतिपादन गर्न सक्छ । तल्ला अदालतले गरेका नवीनतम प्रयास र व्याख्यालाई यसले वैधानिकता प्रदान गर्न सक्छ ।
तल्ला अदालतहरुका बाझिएका दृष्टिकोणमा एकरुपता कायम गराउन सक्छ । यीबाहेक नियुक्ति, सरुवा, बढुवादेखि अंश, कुटपिट, पारिवारिक झगडा लगायतका मुद्दा सर्वोच्चमा ल्याउनु भनेको केहीको व्यापार व्यवसाय सुनिश्चित मात्र गर्नु हो ।
प्रसानिक र देवानी प्रकृतिका मुद्दा मात्र सर्वोच्चमा नआउने व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वोच्चको दुई तिहाई कार्यबोझ कम हुनेछ । काम कम हुनेबित्तिकै गुणस्तरमा ध्यान दिन सकिन्छ ।
गुणस्तर मानव स्रोतको दक्षता वृद्धिदेखि पूर्वाधार व्यवस्थापन र छरितो न्याय सम्पादनबाट मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कार्यक्षेत्र र मुद्दाको प्रकृति निश्चित गरिसकेपछि सर्वोच्चको जनशक्ति पनि सर्वोच्च कोटिकै बनाउनु आवश्यक छ ।
यसका लागि तलैदेखि बीउ हुर्काउनु आवश्यक छ । देशविदेशमा ख्याति कमाएका, विद्यावारिधि गरेका, उच्च कोटिका फैसला लेख्न सक्ने, भाषागत दक्षता पनि भएका न्यायकर्मीहरुको विकास प्रधानन्यायाधीशको हरबखतको चिन्ता हुनुपर्छ ।
संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने जिम्मा विधायिकलाई दिऊँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चाहेमा उनको ठाउँबाट गर्न सक्ने धेरै काम छन् ।
खासगरी अबको केही दशकसम्म न्यायालय कस्तो बनाउने भन्ने उनको हातमा छ । पछिल्ला दशकमा कसैले नपाएको लामो कार्यकाल उनले पाएका छन् ।
यस अवधिमा न्यायालयको कायापलट गर्न सक्ने अवसर उनीसामु छ । उनले चाहेमा यो महामारी एवं लकडाउनको समयलाई उनले पुनःसंरचना एवं व्यापक सुधारको तयारी गर्न सक्छन् ।
जिल्ला तहमा न्यायाधीशको जनशक्ति निकै ठूलो छ । यति ठूलो जनशक्ति आवश्यक हो कि होइन भनेर एकपटक समीक्षा गर्नुपर्छ । भएको जनशक्तिले ठीक ढंगले काम गर्न सकेको छ कि छैन ? न्यायपरिषद, न्याय सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययन गर्न सक्छन् ।
त्यसले करिब आधा जनशक्ति काम नलाग्ने निष्कर्ष दिने सम्भावना बढी छ । जनशक्तिको कोटि विभाजन गरी तीमध्ये कतिपयलाई अध्ययन, तालिम वा प्रशिक्षणमा लगाउनुपर्छ । यसभित्र अदालती बन्दोबस्तका कुरादेखि प्रविधिसम्म पर्छन् ।
त्यस्तै उम्दा न्यायाधीशहरुको सूची तयार गरी उनीहरुलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरी अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । न्यायिक आचरणदेखि योग्यता र दक्षतामा ध्यान केन्द्रित गराउन यो पंक्तिलाई अभिमुखीकरण जरुरी छ ।
तल्ला अदतलतबाट माथिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि पर्याप्त उमेर, आधुनिक प्रविधिमा पोख्त अनि न्याय निरुपणमा कुशल न्यायाधीशहरुको टिम तयार गर्नुपर्छ ।
उनीहरुको धारणा र सीमा त्यही ढंगले विकास गर्न सक्नुपर्छ । कसैको दया वा कृपावापत अदालतमा टेक्न पाएका, जागिरे मनोवृत्ति भएका र यति दिनगन्ती गरेर राम्रो अवसर कुर्नेहरुलाई धेरै महत्व दिनु आवश्यक छैन । उनीहरुलाई अहिल्यैदेखि छाँट्नु आवश्यक छ । अदालतको फाइल बढुवा प्रवृत्ति र मानसिकता तत्काल रोक्नुपर्छ ।
कुनै व्यक्ति जिल्लामा एक नम्बर न्यायाधीश भएपछि कम्तीमा उसले २ वर्ष त्यो अदालतको नेतृत्व गरोस् । कामको मूल्यांकनका आधारमा उसले अर्को अवसर पाओस् । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पनि २ देखि ५ वर्ष अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सर्वोच्चमा जाँदा पनि मुख्य न्यायाधीशहरुको नेतृत्व र न्यायिक क्षमता दुवै जाँचिनुपर्छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सबै सर्वोच्च पुग्न सक्दैनन् । सर्वोच्चमा पुग्नेहरु सबै प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्दैनन् । तर क्षमतावान्हरुले अवसर पाउने गरी मूल्यांकन प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । उनीहरुलाई वृत्ति विकासको अवसर पनि त्यही ढंगले जुटाइदिनुपर्छ ।
यसो गर्न सकेमा केही वर्षमै अदालतको मुहार फेरिनेछ । अदालतप्रति बिग्रेको साख फिर्ता हुन सक्छ ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा २ जनासहित केही उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त भएकाले नियुक्तिको मौका छ ।
यसमा शक्तिकेन्द्रबीच भागबण्डा वा लाइनमा भएकाहरुले पालो पाउने प्रथा अन्त्य गरी पर्याप्त सेवाको अवसर र योग्यता भएका स्मार्ट एवं आधुनिक समयको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरुको छनोट वर्तमान नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ ।
यसले नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्व क्षमता देखिनेछ । कोही रिसाउने वा खुसाउनेबारे सोच्न थालिएमा उनीभित्रको न्यायिक चेतलाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
भारतीयलाई नागरिकता दिलाउने प्रशासकीय अधिकृत पुर्पक्षका लागि...
काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा ए डिभिजन लिगका ६ वटा क्लबलाई अन...
नयाँ प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) छनौट गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्द...